मृतसागर भनेको के हो ? | Ratopati
यस सागरले ग्रेट रिफ्ट भ्यालीमा गहिरो खाडल बनाएको छ । जुन पूर्व र पश्चिमतिर समानान्तर रुपले वलौटेढुंगा र चुनढुंगाद्वारा छेकिएको छ ।
यो सागरको पानी नुनिलो हुनुको पनि आफ्नै कारण छ । यसको पानी बाहिर जाने बाटो छैन । तर वर्षेनी १४०० कि.मि. का दरले यहाको पानी वाष्पीकरण हुन्छ । पानी चाहि सुकेर जाने तर पानीले बगाएर ल्याएको खनिज तथा लवणहरु भने थुप्रिँदै जाने प्रक्रियाले गर्दा मृत सागरको पानी अन्य समुद्रको भन्दा ७ गुना (लगभग ३० प्रतिशत) बढी नुनिलो छ । यस सागरमा मान्छेले हातगोडा नचालिकन बस्दा पनि नडुब्नु, तैरिनुको खास कारण नै पनि नुनिलो भएको कारण त्यहाँको पानीको घनत्व बेसी भएकोले नै हो । यस सागरको पानी नुनिलो भएकै कारण, केवल एक–दुई प्रकारका जीवाणुहरु वाहेक अन्य जीवजन्तुहरु बाँच्न सक्तैनन् । यस क्षेत्र धेरै तातो र सुख्खा छ । यहाँ वर्षको मात्र ५० मि.मि. (२ इन्च) वर्ष हुन्छ ।
Title Photo: https://upload.wikimedia.org
हथौडा जस्तो टाउको भएको सार्क माछा
पत्याउनुहोस् वा नपत्याउनुहोस्